Ịdọ aka ná ntị: Iji AFF_LINK na-akọwapụtaghị oge niile - echebere 'AFF_LINK' (nke a ga-atụba mperi na ụdị PHP n'ọdịnihu) /media/soydemac.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php na akara 22
Ọrụ Mgbanwe Night nke macOS 10.12.4 adịghị arụ ọrụ ka f.lux, site na onye nrụpụta ya | Esi m mac
Ọrụ Mgbanwe Night nke macOS 10.12.4 adịghị dị ka f.lux, dị ka onye mmepụta ya si dị
Ụlọ Ignatius | | MacOS Sierra
Ọ bụghị oge mbụ ọ gaghị abụ nke ikpeazụ Apple na-agbakwunye ọrụ dị adị dị ka nhọrọ site na ngwa ndị ọzọ. Nwelite macOS kacha ọhụrụ ewetabeghị atụmatụ Night Night, arụ ọrụ naanị dakọtara na Macs niile ruru ahịa kemgbe 2012, na-ahapụ ndị ọrụ nwere Macs ndị okenye na-enweghị nhọrọ a, onye a ga-amanye iji f.lux, nke doro anya na dịka onye nrụpụta ya si dị, dị irè karịa ọrụ ala nke ọrụ mmelite macOS kachasị ọhụrụ nyere.
Dịka anyị nwere ike ịgụ na peeji nkwado Apple maka ọrụ Mgbanwe Night:
Nnyocha egosiwo na ikpughe na-acha anụnụ anụnụ n’abalị nwere ike imetụta ụda circadian ma mee ka o sie ike ihi ụra. Mgbanwe Night na-eji elekere kọmputa gị na geolocation iji chọpụta mgbe etinye ya. Ọ na-agbanwezi agba na ihuenyo na-akpaghị aka na njedebe kachasị mma nke ụdịdị dị iche iche. N'ụtụtụ, enyo ihuenyo ya na ụkpụrụ ya.
Mana dị ka f.lux si kwuo, nsogbu na mmejuputa nke nwa afọ Night Shift ọrụ bụ na mbenata blues ezughi. Na elu eserese anyị nwere ike ịhụ ka ụmụ amaala macOS na-arụ ọrụ na-ebelata naanị acha anụnụ anụnụ mgbe arụ ọrụ, nke ka dị elu.
Na elu eserese anyị nwere ike ịhụ etu na Mbelata-acha anụnụ anụnụ etoju na f.lux bụ nnọọ elu karịa na-emejuputa atumatu site Apple. Dabere na f.lux:
Usoro circadian anyị anaghị emeghachi omume na obere mgbanwe na "agba." Kama, ọ na-emeghachi omume n'ụzọ dị mkpa na "oke" nke ìhè. Anya anyi di nma na imata obere agba nke di iche na ibe ya, mana nke a bu sistem di iche karie nke na agba ndi circadian rhythms.
Anyị nwere ike ịnwale onwe anyị site na ịgbalite ọrụ nke na-abịa site na macOS 10.12.4 ma mechaa rụọ ọrụ f.lux. f.lux awade anyị nnọọ odo agba ebe ọnụnọ nke -acha anụnụ anụnụ bụ imperceptible n'adịghị ka ụmụ amaala Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Sierra » Ọrụ Mgbanwe Night nke macOS 10.12.4 adịghị dị ka f.lux, dị ka onye mmepụta ya si dị
F Lux na-arụ ọrụ dị ukwuu.
LastPass ghotara onodu adighi nma ma dikwa ndi oru ya aka na nti ka ha gbochie ha
Debe Mac gị na ngwa ndị a na ere maka obere oge